Onyinyo Na-acha Ọcha: Das Ị Ga-eme Mgbe Nzuzo Gị N'adaa
Ọ bụ onye nchịkwa kasị njọ nke ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla – na ọ bụ karịa karịa ka i nwere ike iche.
Ị na-aga na ebe nrụọrụ weebụ gị, ma ọdịnaya niile ị na-arụ ọrụ siri ike na-efu. Kama nke ahụ,-na-enwe nsogbu, ozi ezighị ezi jupụtara na mgbagwoju anya, ma ọ bụ ka njọ: leer, Decke na-acha ọcha n’enweghị ihe ntinye iji soro.
Na nso nso a, o nur m. Ebe nrụọrụ weebụ m niile na mberede agaghị eburu, na-egosipụta "mmekorita njikọta". Ekwetara m na m na-ama jijiji! Ma enwere m ike ime ihe iji gbakee, ana m aga n’ihu ime ihe iji mee ka ọ ghara ime ọzọ.
Ebe nrụọrụ gị na-ada ụra, karịsịa ma ọ bụrụ na ị dabere na ya iji nweta ego gị. Oge ọ bụla ọ dị ala nwere ike ịzụta ahịa, ndu, na ego ha ga enweta.
Ị na-eche ihu na-acha ọcha nke ọnwụ, maọbụ na-echegbu onwe gị banyere ihe ị ga-eme mgbe ọ bloß gị? Mgbe nke a bụ maka gị.
1 Nzọụkwụ 0: Mee ọkwa
2 Nzọụkwụ 1: Chọpụta-Fehler
2.1 Chọpụta na ọ bụghị naanị gị
3 Nzọụkwụ 2: Nchọpụta nsogbu WordPress
3.2 Esi edozi nkwụsị Daten
4 Nzọụkwụ 3: Lelee Bochum Weebụ gị
5 Ihe Mgbochi Mgbochi …
Nzọụkwụ 0: Mee ọkwa
Nke a bụ "nzọụkwụ 0" n’ihi na ọ bụghị usoro nhazi nsogbu, ma ọ dị mkpa ọ dị.
Mgbe saịtị gị dị ala, ọ dị oké mkpa iji mee ka ndị na-ege gị ntị nọrọ na aka.
Mgbe onye ọbịa na-aga na saịtị gị ma ọ bụrụ na ọ gaghị emetụta ya, ha ga-aghọta nke ọma. Ọ bụ ịhọrọ ma ị ga-ewepụ nsogbu ahụ, ma ọ bụ mee ka ọ ghọọ iwe.
Ó buru na na-emetụ ma kọwaara NDI í na-EGE gi NTI IHE-na na eme mgbe ha Nwere IKE iTU anya na ebe nrụọrụ weebụ gi ga-alọghachi, ha ga-enwekwu Ndidi na nghọta.
Ọ bụrụ na ịnweghị ha na akaghị aka, ha nwere ike iwe iwe na akara gị, ma ọ bụ kpebie ịga leta onye asọmpi kama.
Ozi ọma bụ, ọ dị mfe igbochi nke a. Naanị na-edebe ha na akaghị aka site na:
Ime ọkwa banyere mgbasa ozi ọha na eze. Debe ya nkenke, ma nye ndị na-ege gị ntị ihe doro anya nke ihe na-eme nakwa mgbe ha nwere ike ịtụ anya na ị laghachi.
Na-ezipụ ozi ngwa ngwa na listi gị ma ọ bụrụ na i chere na saịtị gị ga-agbada maka ihe karịrị otu ụbọchị.
Ịdebe ozi na ebe nrụọrụ weebụ gị (ọ bụrụ na i nwere ike). Ọ bụrụ na saịtị gị ka dị elu na ị nwere ike ịme mgbanwe na WordPress gị, ị na-eji ngwa mgbakwunye dị.
Nzọụkwụ 1: Chọpụta-Fehler
Rịba ama ozi njehie (ọ bụrụ na ọ dị) ị na-enweta, wir waren nseta ihuenyo. Ndị a ga – adị mkpa maka usoro nchọpụta nsogbu, ma ị na – eme ya n’onwe gị ma ọ bụ na – achọ enyemaka site na ọkachamara.
Ajọkarị njehie ị nwere ike ịhụ gụnyere:
Njikọ ejikọtara: Nke a bụ njehie ihe nchọgharị gị nwere ike inye gị maọbụrụ na ọ na-eche ogologo oge iji jikọọ ma nweta Daten ndị dị mkpa igosipụta ebe nrụọrụ weebụ gị. O nwere ike kpatara nsogbu na njikọ anntanetị gị, ntọala na ngwaọrụ gị (dịka Firewall), ụlọ ọrụ weebụ gị, ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ gị. Nke a bloß na ebe nrụọrụ weebụ m, o wee bụrụ ihe esemokwu oge na ụlọ ọrụ m nwere, Bluehost.
Achọghị 404: Nke a bloß otu n’ime ebe nrụọrụ weebụ m mgbe ọ nwụsịrị. Ụlọ na-arụ ọrụ nke ọma, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ede akwụkwọ, ọ ga-adị ka ọ na-efu. O wee pụta na n’ụzọ ụfọdụ, m ehichapụla faịlụ .htaccess n’oge nchịkọta saịtị ahụ.
Ein Chọtaghị Server: Njehie a nwere ike ime site na njikọ anntanetị gị, ma ọ bụ site na nsogbu na ntanetị weebụ gị ma ọ bụ ọrụ mpaghara. Ụ bụ ober ihe kpatara njehie WordPress na gburugburu gị ma ọ bụ ngwa mgbakwunye faịlụ.
Leerer weißer Bildschirm: Achịcha na-acha ọcha na-eme ka nsogbu dakwasị gị n’ihi na ọ dịghị ihe doro anya ị ga-eme. Ọ na-esitekarị na mbipụta na koodu nke saịtị gị, ma na WordPress ma ọ bụ isiokwu ma ọ bụ ngwa mgbakwunye.
Njehie Ịmepụta njikọ njikọ Daten: Nke a bụ njehie WordPress kachasị emekarị nke nsogbu na nhazi nke faịlụ wp-config, dịka aha ọjọọ data ma ọ bụ paswọọdụ. A pụkwara ime ya ma Ó buru na IHE nkesa Daten gi adịghị anabata ozi maka IHE ụfọdụ (nsogbu na Onye-na elekọta weebụ gi), ma ma Ó bu Ó buru nchekwa Daten gi na emerụla.
Usoro Njehie Zoro ezo na weebụsaịtị: Mkpokọta weebụ gị nwere ike igosi ezi ma ọ bụrụ na ọ bụ igosipụta koodu mmeghe na ibe ma ọ bụ na nkesa gị, dị ka "ọrụ achọtaghi," ma ọ bụ "njedebe a na-atụghị anya ya." Nke a nwere ike ịme site na mgbakwunye ma ọ bụ isiokwu, ma ọ bụ site na nrụrụ aka nke gị isi faịlụ WordPress.
Chọpụta na ọ bụghị naanị gị
Olileanya na ọ bụ ikpe na onye ọ bụla ọzọ nwere ike ịhụ ebe nrụọrụ weebụ gị dị mma.
Gbaa mbọ hụ na ọ bụghị naanị ihe nchọgharị gị, kọmputa gị, ma ọ bụ njikọ ịntanetị gị:
Kọwaa Cache nchọgharị gị
Lelee saịtị gị na DownForEveryoneOrJustMe.com
Gaa na saịtị gị site na iji ihe nchọgharị ọzọ
Gbalịa iji ngwaọrụ dị iche (ama ama, mbadamba, laptọọpụ)
Jiri njikọ anntanetị ọzọ (Wi-Fi), ma ọ bụ jụọ enyi gị ka ọ lee ya anya
Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị gosipụtara ezi ihe nchọgharị, ngwaọrụ, ma ọ bụ njikọ Ịntanetị, ị chọpụtala ebe nsogbu ahụ dị. W nwere ike ịnweta enyemaka iji dozie ngwaọrụ gị ma ọ bụ njikọ, ma ọ dịkarịa ala, saịtị gị ka dị elu!
Nzọụkwụ 2: Nchọpụta nsogbu WordPress
Ọ bụrụ na nsogbu ahụ adịghị na ngwaọrụ ma ọ bụ njikọ Ịntanetị, ọ nwere ike ịbụ na saịtị WordPress gị.
Chee echiche banyere mgbanwe ọ bụla ị bloß n’oge na-adịbeghị anya. Ị meela n’oge na-adịbeghị anya:
Emelitere gị isi WordPress mbipute
Gbanwee ntọala ọ bụla
Gbanwee faịlụ work.php gị ma ọ bụ faịlụ ọ bụla ọzọ
Ntọala ma ọ bụ Plugins ọ bụla arụnyere, ebunyeghị, ma ọ bụ emelite
Ọ bụrụ na ị nwere ike, gbalịa gbanwee mgbanwe ọ bụla na-adịbeghị anya, ma ọ bụ weghachite site na ndabere ndabere, iji hụ ma ọ ga-edozi nsogbu ahụ.
Maka izugbe WordPress arụpụta nsogbu, nke mbụ na-agbalị ịbanye na WordPress Dashboard. Ọ bụrụ na ịnweghị ike, ọ nwere ike ịbụ mbipute Bochum, ọ bụghịkwa okwu na saịtị gị. Otú ọ dị, ị ga-anwale usoro nhazi nsogbu ndị eine Seite na akaụntụ Bochum gị ma ọ bụ onye FTP ahịa. Ọ bụrụ na emechibidoro gị, lelee akwụkwọ Vishnu na Ezigbo Ihe bloße A Ga-eji Kpochie Gị na WP-Admin gị.
ỌZọ, gbalịa gbanwee na ndabara WordPress isiokwu ịhụ ma ọ bụrụ na-edozi esemokwu ahụ.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, gbalịa kwụsị nkwanye gị niile iji hụ ma ọ ga-edozi nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na ọ dị, ịnwere ike ịmeghachi ihe nkwụnye gị n’otu n’otu iji chọpụta onye na-akpata nsogbu ahụ.
Ọ bụrụ na isiokwu ma ọ bụ ngwa mgbakwunye na-akpata nsogbu ahụ.
Esi edozi nkwụsị Daten
Ụfọdụ nsogbu WordPress kpatara ihe nchekwa data rụrụ arụ. Ọ bụrụ na ị na-enweta njehie njikọ data nchekwa, ma ị kwenyesiri ike na ozi nbanye gị na faịlụ wp-config ya ziri ezi, Lelee Lori na post na Nchọpụta nsogbu Mgbe Mbugharị Mwepụ Gị na Onye Ọhụụ Ọhụụ aghọwo ụra maka nhazi nzọụkwụ site na ịrụzi nchekwa data gị.
Nzọụkwụ 3: Lelee Bochum Weebụ gị
” weebụ gị.
W nwere ike ịlele ebe nrụọrụ weebụ nke onye na-elekọta gị na akụkọ mgbasa ozi ọha na eze iji hụ ma ọ bụrụ na ha amaralarị nsogbu ọ bụla. W nwere ike chọpụta na ha dara ala maka nhazi usoro, yana enwere ike ịnweta ozi gbasara mgbe ị nwere ike ịtụ anya na saịtị gị ga-akwado.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, nzọụkwụ ọzọ bụ ịkpọtụrụ nkwado. Dabere na ụdị nkwado onye na-elekọta weebụ gị na-enye.
Mgbe saịtị m gbadara, agbalịrị m ịnweta nkwado site na nkata ndụ, mana oge ichere echere na 30 nkeji, ya mere, aghaghị m ịde akwụkwọ tiketi kama. Mgbe m na-azaghị tiketi nkwado m ruo ọtụtụ izu, amaara m na ọ bụ oge iji gbanwee ụsụụ ndị agha. Mgbe Bluehost eji nye nnukwu ọrụ, achọpụtakwara m na ebe nrụọrụ m na-agba ọsọ jiri nwayọọ nwayọọ karịa nke ha na-adị. Ebe ọ bụ na enwere m ihe ọ pụtara iji kwalite ọbịbịa m, agbanwere m ịnweta VPS Bochum na InMotion kama.
Ihe Mgbochi Mgbochi …
Iji gbakee ngwa ngwa site na nchịkọta saịtị, ịkwesịrị ịdị njikere tupu ya emee. Jide n’aka na i nwere ezigbo ulo oru ntanetakwu weebụ nakwa na ị na-enwe mgbe niile na-akwado gị na saịtị. Zụlite onwe gị na ntanetịime nkwado weebụ gị wee mara ebe ị ga-aga ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọsọ ọsọ.
Mgbe oge na-abịa, ị ga-adị njikere ma nwee ike ịgbake ngwa ngwa mgbe saịtị gị na-agbada.
ụbye onyechịkwakasịnjọnke ebenrụọrụweebụụbla-naọbụkarịakarịaka i nwere ike iche. -na-aga na ebenrụọrụweebụgị，maọdịnayaniileịna-arụọrụsiri ike na-efu。 Kama nkeahụ，na-enwe